5 Qaab oo Dabiici ah oo Ilko cad cad loo yeesho | shumis.net
Home » galmada » 5 Qaab oo Dabiici ah oo Ilko cad cad loo yeesho
5 Qaab oo Dabiici ah oo Ilko cad cad loo yeesho
Qiyaastii dad badan oo naga mid ah ayaa marka ay sawir gelayaan qariya ilkahooda, iyadoo ay sabab u tahay ilkaha oo dhaawacyo ama midabo kala duwan yeeshay kadib markii ay cabeen Kaffee, Jaad, Sigaar iyo Shaah.
Ma og tahay in ilkahaagu ay yihiin meelaha ugu horreeya ee qofka laga qiimeeyo, mise og tahay inay calaamad u yihiin fayaqabka iyo kalsoonida qofka. Haddii ilkahaagu ay wasaq leeyihiin waxay calaamad u tahay inaad gabtay noloshaada oo dhan.
Haddaba waxaan idiin soo gudbineynaa 5 qaab oo aad ku cadeyn kartid ilkaha.
1. Cadeyso marka aad wax cunto ama aad cabto
Arrinkani aad ayuu u wanaagsan yahay balse ma fududa in qofku uu cadeysado mar allaale iyo marka uu wax cuno ama cabo, markaas kadib ilkahu wey caddaanayaan.
2. Isticmaal kicisada burka
Kicisada burka ayaa kaalin weyn ka qaadata sida ilkaha looga dhigo kuwo cad, iyadoo dad badan ay isku raaceen, waxaad isku dartaa xaddi yar oo fixisada burka ah iyo hydrogen peroxide kadibna ku cadeyso, waxaa afka iyo ilkaha ka baxaya wixii jeermis ahaa.
3. Saliidda Qumbaha
Saliidda qumbaha ayaa ka mid ah walxaha ilkaha ka dhiga kuwo cad haddii lagu cadeysado iyadoo arrinkaan dad badani ay qireen. Hal qaaddo oo saliid qumbe ah afka ku shub kadibna ku luqluqo illaa 5-20 daqiiqo ama dhowr dhibcood oo saliidda qumbaha ah ku dhibci cadeyga kadibna ku cadeyso.
4. Khalka Tufaaxa
Waxaa la caddeeyay ugu dambeyntii in khalka tufaaxu uu nadiifyo afka iyo ciridka kana saaro qashinka ilkaha ku jira, gaar ahaan wuxuu nadiifiyaa midabada ay sameeyaan Kaffeega iyo sunta sigaarka ee nicotine-ka. Khalka tufaaxa ayaa la xaqiijiyay inuu ilkaha si dabiici ah u caddeeyo.
Waxaa soo baxayay waayahan warar sheegaya in Liintu ka dhigto ilkaha kuwo cad cad, waxayna dishaa jeermiska afka, iyadoo dhanka kalena meesha ka saarta neefta ureysa ama af urka.
Tags: cadeyga ilkaha, daryeelka ilkaha, ilko cad cad, kicisada burka, Nadaafada ilkaha, qaabka ilkaha loo cadeeyo, qaabka loo cadeysado
Title: 5 Qaab oo Dabiici ah oo Ilko cad cad loo yeesho